Abuuritaanka iyo isticmaalka waji waa arrin aasaasi ah oo ah wadadii ugu wanaagsaneyd ka dib markii Raadka, halkan waxaan ku eegi doonaa habka loo abuuro waji ka menu qaabka, kaas oo ah habka ugu sahlan si ay u hirgeliyaan maaskaro.
Si aan ku bilaabo in aan marka hore la abuuro halabuurka cusub, waxaan abuuray halabuurka ah 320x240 xal u yar, taas aawadeed, oo intaa ku daray lakabka text in si fudud ku jira hal eray 'maaskaro ee jaalaha ah.
Tani waxay la sifaynayo waa in lagu muujiyo farsamada, waxaad isticmaali kartaa maaskaro on nooc kasta oo ah lakabka aad rabto in aad mashaariicda, sida aynu ka wada hadli doonaan ka dib on.
2. qalab qaabka
Waxaa muhiim ah in la fahmo sida qalab qaabka shaqeeya shareeraysaa wax ku ool ah, qalab ay tahay ujeedada dual iyo sida oo kale waxaa muhiim ah in la raaco tallaabooyinka saxda ah si aad u hesho saamayn aad rabto.
First off, qalab laftiisa waa menu ugu sareeya, ama 'S' toobiye, hoos u soo dhaadhacay menu kuu ogolaanaya in aad doorato noocyo kala duwan oo qaabab sida aan halkan ka arki kartaa.
Waxaad kale oo wareeg marayo qaababka adigoo isticmaalaya toobiye Q ah.
Isticmaalka qalab qaabka abuuri doonaa weji dabool KALIYA haddii lakabka aad rabtid in aad hoosaasin la doorto ee waqtiga, haddii aan waxba la doorto, qalabka abuuri doonaa lakabka qaab. Waxaa jira marar badan waxaad u baahan doontaa inaad tan sameyso, laakiin mashruucan aan eegaya shareeraysaa si gaar ah, oo si aan loo hubiyo in our lakabka qoraalka 'maaskaro' muuqanayaan, dooro qalab qaab afargees, oo u dhowow maaskaro ku wareegsan qoraalka, taas oo waxa ay keentey in waxa aynu aragno in shaashada this.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in haddii 'rogay' sanduuqa waxaa laga soo socota si ay qayb maaskaro ee waqtiga ka, maaskaro ku dhuuntaa wax kasta laakiin waxa ku jira gudahood maaskaro laftiisa. Shuqullo rogay oo cagsi ah, wax walba oo la arki karo, laakiin waxa gudaha maaskarada.
Halkan waxa dhacaya haddii aan jiidi waji off qoraalka si aad u muujiso sida tani u shaqayso.
Qoraalka waa inay wali jiraan, ayaa aan la dhaqaajin karin oo dhan, waji kaliya dhuuntaa qaybo ka mid ah sida ay hareeraha guuro. Tani waa aasaaska ka-abuurka gudahood ka dib Raadka, laakiin hadda waxaan leenahay qoraalka ah iyo maaskaro, waxa run ahaantii aan samayn karnaa waa la?
3. Movement darista
Sida waxyaalaha ugu wada in dib markii Raadka, abuuraya dhaqdhaqaaq isticmaalaya waji ku salaysan yahay ku dhawaad ​​function keyframe ah. Waxaannu keyframes ku sugan waqtiga, iyo ka dib Dhibaatooyinka animates dhibcood ee u dhaxeeya noo. Tani waxay noo oggolaaneysaa in la abuuro qaar ka mid ah saamaynta xiiso leh oo kaliya ah maaskaro qaab fudud oo hal eray oo qoraal ah.
Waxaana bilaabi ula keyframe hore. Muddo lakabka qoraalka ee waqtiga aan doorteen Waji ka dibna riix stopwatch soo socda si maaskaro jidka si ay u abuuraan naga keyframe ugu horeysay bilowgii clip this.
Haatan waa inaan booska aan bilowga aan abuuro kartaa dhaqdhaqaaq by horumarinta dulqabo waqti ka dibna la qabsado maaskaro ee keyframe soo socda. Sida ay muujinayso hoos ku toogtay, kontaroolada ee waji dheereyn si fudud u dhaqaaqo, aad qabsato karaa opacity ah, baal mask si ay u milmaan, xitaa badasho qaab oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqa.
Xaaladdan oo kale, in kastoo, waxaan si fudud u siyaadinay waqtiga 5 ilbiriqsi oo dhowr qeybood waji ka mid geeska, iyo abuuray keyframe labaad.
Keyframe xigta loo abuuray si la mid ah, halkan waxaan ku hormartay dulqabo waqtiga iyo dhaqaaqay waji kor dhinaca midigta ee qoraalka.
Sidaas waxa aan ilaa hadda leeyihiin waa waji laga bilaabo off daaha ka hadalka oo dhan, ka dibna sii yaraanaya galay mid ka mid geeska, ka dibna u dhaqaaqin ilaa bidix ee sare, waxaan hadda abuuri doonaa laba keyframes dheeraad ah si ay u soo guuraan dhanka midig sare ee qoraalka, iyo final xaq u hooseysa.
Hadda waxaan ku leeyihiin siiqo ay meesha aynu ka bilaabi eray oo dhan "mask", taas oo markaas u baaba'aa sida maaskaro hoos u sii yaraanaa, markaas qaybo ka mid ah erayga la muujiyey sida maaskaro ku safri agagaarka qoraalka.
Qaybta ugu danbaysaa waxay tahay si fudud in ay ballaariso waji iyo bidix mar kale daaha ka hadalka oo dhan.
Tani waa keyframe ugu dambeeya ee dhaq-dhaqaaqa iyo dhameystiraya dhaqdhaqaaq yar.
Inkastoo cad, sida isku xigxiga oo fudud ma inuu ku guuleysto abaalmarinta kasta, waxa aanu muujiyo tallaabooyinka aasaasiga ah ee ay marin-habaabinayaan waji abuuray qalab qaabka iyo hubi in aad bilaabi kartaa in aad aragto fursadaha, ku dar in dhaqdhaqaaqa ee lakabka hoos waji ayaan ahay oo waxaad soo saari kartaa qaar ka mid ah saamaynta cajiib ah si dhaqso ah runtii. Si kastaba ha ahaatee, sida aan soo aragnay, waxaa jira fursado dheeraad ah si ay ula qabsadaan saamaynta mask si haatan waa wakhtigii la eegto, kuwaas oo si faahfaahsan yar iyo sidoo kale.
4. gashiga Multiple
Waxaad heli kartaa in ka badan hal maaskaro on daaha, oo aad u kala duwanaan karaan sida ay ula dhaqmaan si ay u abuuraan saamaynta badan, oo muujinaya ku abuuray halabuurka cusub, oo intaa ku daray labo lakab adag oo isticmaalaya lakabka> New> adag , lakabka koowaad waa guduudan , iyo buluug lakabka labaad. Markaas iyadoo la isticmaalayo qalab qaabka la lakabka buluug xulay, waxaan abuuray 3 waji qaab gooni ah sida aan halkaan ku arki kartaa.
Tani waxay muujinaysaa dhan saddex waji foomka caadiga ah, waxaan iyaga u dabooleen in lagu muujiyo sida aad u bedeli kartaa hababka kala duwan ee saamaynta maaskaro kala duwan. Default waxaa 'dar', sida laga arki karo xagga bidixda ka ah maaskaro kasta oo guddi waqtiga. Waxaan bedeli kartaa toddoba qaabab kala duwan, sida aan halkan ka arki kartaa.
Beddelidda maaskaro 2, mid dhexe, si 'jar' ayaa shaaca ka qaaday natiijada
Sida aynu ka arki kartaa, waxa ay masaxdaa maaskarada in uu yahay waxa hoose, laakiin saameyn ah kuma laha mid ka mid ah in uu yahay waxa ku xusan.
Beddelidda si midaysan oo shiiqda maaskarada u overlaps ka yimaada xagaas iyo isgoyska marka laga reebo, oo ugu dambeyntii
Waxaa Dejinta jirin muhiimad disables maaskarada.
4 Kuwaasu waa hababka ugu muhiimsan oo loo isticmaali doonaa shuqulkaaga oo maaskaro, kuwa kale waxay yeelan karaan isticmaalka ay, tijaabinayaan iyaga la tahay sida ugu fiican si ay u fahmaan saamaynta ay xaaladaha kala duwan.
Foomamka shareeraysaa dhismaha aasaasiga ah ee farsamooyinka badan loo isticmaalo dib markii Raadka si ay u abuuraan saamaynta cajiib ah, iyo fahamka aalada iyo fursadaha heer ee saldhiga ah waa talaabo muhiim ah oo la isticmaalayo ilaa xadka ay ka buuxaan ka dib Raadka, in kasta oo dhaqdhaqaaqa noo fudud waa arrin ah clip aasaasiga ah, waxa ay qoreysa asaaska dhaqdhaqaaqa iyo maaskaro qabsiga in dhammaan dhinacyada kala duwan ee shareeraysaa u baahan yihiin. Inkastoo dad badan ay isku dayaan oo ku boodaan in dhamaadka qoto dheer oo dhan farsamooyinka sare, waxaa muhiim ah in leeyihiin waxgarasho wanaagsan, oo ka mid ah geedi socodka salka iyo sida ay ula dhaqmaan si ay u guulaystaan ​​in muddo dheer.
Daawo Video this Tutorial:
> Resource > Video > Sida loo abuuro maaskaro ka dib markii qaab la Raadka